Fahasamihafana eo amin'ny tsingerin'ny estrous sy menstrual | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny tsingerin'ny estrous sy menstrual | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / biolojia / fahasamihafana eo amin'ny tsingerin'ny estrous sy menstrual
Fahasamihafana eo amin'ny tsingerin'ny estrous sy menstrual
25 martsa 2021 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny tsingerin'ny taolana sy ny fadim-bolana dia ny tsingerin-tsolika dia ny tsingerim-pananahana an'ny vehivavy biby mampinono tsy primaty izay ahitan'ny rindrin'ny tranon-jaza ny endometrium ary ny tsingerim-bolana kosa ny tsingerim-pananahana an'ny vehivavy ny biby mampinono primates izay endometrium dia alatsaka amin'ny rà.
Ny tsingerin'ny estrous sy ny fadim-bolana dia karazana tsingerina roa izay mitranga amin'ny biby mampinono vehivavy. Ny tsingerina roa dia manomboka aorian'ny fahamatorana ara-nofo amin'ny vehivavy. Ny hormonina miteraka dia mamporisika ireo tsingerina ireo amin'ny vehivavy. Ireo tsingerina ireo dia mitranga mba hanomanana biby mampinono vehivavy mitazona zaza mandritra ny fitondrana vohoka. Ny tsingerin'ny Oestrous dia mitranga amin'ny tsy primata toy ny omby, ondry, soavaly, bitro ary kisoa sns. Ny tsingerim-bolana dia mitranga amin'ny primata toy ny rajako, rajako ary olona sns. ny tsingerim-bolana.
2. Inona no atao hoe Estrous Cycle
3. Inona no atao hoe Cycle menstrual
4. Ny fitoviana eo amin'ny tsingerin'ny estrous sy menstrual
5. Fampitahana mifanila - Estrous vs Cycle menstrual amin'ny endrika tabular
Inona no atao hoe Estrous Cycle?
Ny tsingerin'ny estrous dia tsingerim-pananahana an'ny vehivavy biby mampinono tsy voalohany. Noho izany, ny tsingerina mahery vaika dia mitranga amin'ny vehivavy tsy primata toy ny omby, kisoa, ondry, osy, serfa, elk, soavaly, hamsters, ferrets, canines, dioestrous, bera, amboahaolo, amboadia, sns. Ny endometrium dia averin'ny ny rindrin'ny tranon-jaza ao amin'ireo biby ireo. Noho izany, ny fandehanan-dra dia tsy mitranga mandritra ny tsingerin-kibo.
Sary 01: Cycle Estrous
Amin'ny ankapobeny, ny tsingerin'ny estrous dia miverina aorian'ny 21 andro. Ny biby vehivavy dia mihetsika ara-nofo raha tsy mandritra ny dingan'ny estrus amin'ny tsingerina. Ny tsingerina estrous dia sarotra kokoa noho ny tsingerim-bolana. Manana dingana fohy efatra izy: proestrus, estrus, metestrus ary diestrus.
Inona no atao hoe tsingerim-bolana?
Ny tsingerim-bolana dia ny tsingerim-pananahana an'ny vehivavy primata, indrindra amin'ny olombelona. Amin'ny ankapobeny dia miverina izy io aorian'ny isaky ny 28 andro. Ankoatr'izay, ny tsingerim-bolana dia manomboka aorian'ny fahamatorana ara-nofo (amin'ny fahamaotiana) ary mitohy mandra-pahatongan'ny fivalanana. Misy dingana telo lehibe amin'ny tsingerim-bolana. Izy ireo dia vanim-potoana, vanim-potoana (follicular), ary sekretera (luteal). Ny ovulasi dia mitranga amin'ny vanim-potoana ovatory. Mitranga izany eo anelanelan'ny dingana manaparitaka sy miafina. Ny hormonina miteraka dia mitarika ny tsingerim-bolana.
Sary 02: tsingerim-bolana
Misy haavo estrogen avo lenta amin'ny dingana mampitombo. Ankoatr'izay, misy ambaratonga avo indrindra amin'ny progesterone ao amin'ny sehatra miafina. Ny vehivavin'ny primata dia mavitrika amin'ny fotoana rehetra amin'ny tsingerim-bolana. Mandritra ny vanim-potoana, ny endometrium dia alatsaka amin'ny primata.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'ny tsingerin'ny estrous sy menstrual?
Ny tsingerin'ny estrosa sy ny fadimbolana dia amin'ny biby mampinono.
Ny tsingerina roa dia manomboka aorian'ny fahamatorana ara-nofo amin'ny vehivavy ary mitohy mandra-pahatongan'ny fivalanana.
Ireo tsingerina ireo dia entin'ny hormonina miteraka amin'ny vehivavy.
Manomana biby mampinono vehivavy izy ireo amin'ny fitondrana zaza mandritra ny fitondrana vohoka.
Ireo tsingerina roa ireo dia manome ny vehivavy biby mampinono amin'ny vehivavy fotoana maro, mba hitoe-jaza mandritra ny androm-piainany mamokatra.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny tsingerin'ny estrous sy menstrual?
Ny tsingerin'ny estrous dia manondro ny tsingerim-pananahana an'ny vehivavy biby mampinono tsy voalohany. Raha ny tsingerim-bolana kosa dia manondro ny tsingerim-pananahana an'ny vehivavy biby mampinono. Ka io no mahasamihafa ny fihodinan'ny taolana sy ny fadimbolana. Ny fahasamihafana lehibe iray manelanelana ny fihodinan'ny taolana sy ny fadim-bolana dia ny famerenana ny endometrium mandritra ny tsingerin'ny estrous raha ny endometrium kosa alatsaka mandritra ny tsingerim-bolana.
Ity infographic etsy ambany ity dia mamintina ny fahasamihafana misy eo amin'ny tsiranoka (estrose) sy ny fadimbolana amin'ny endrika tabular.
Famintinana - Kitapo Estrous vs Menstrual
Ny tsingerin'ny estrous sy ny fadimbolana dia tsingerim-pananahana roa mitranga amin'ny biby mampinono vehivavy. Izy ireo dia mampiseho ny asan'ny ovarianan'ny bisikileta. Ny tsingerin'ny estrous dia mitranga amin'ny biby mampinono tsy voalohany fa ny tsingerim-bolana dia amin'ny primata. Ka io no mahasamihafa ny fihodinan'ny taolana sy ny fadimbolana. Ny fahasamihafana lehibe iray manelanelana ny tsimok'aretina sy ny fadimbolana dia mandritra ny tsingerin'ny estrous dia averina madiodio ny endometrium ary mandritra ny tsingerim-bolana dia mivoaka amin'ny alàlan'ny rà ny endometrium.
1. “Cycle Estrous.” Embryology, Hita eto .
2. “Fitaovana tsingerina amin'ny fadim-bolana.” Womenshealth.gov, 16 martsa 2018, Azo jerena eto .
1. "Anatomy sy physiology an'ny biby Ny tsingerin'ny oestrous" - Sunshineconnelly ao amin'ny Wikibooks anglisy no nampakatra azy tany am-boalohany. - Nafindra tamin'ny en.wikibooks ho an'ny Commons avy amin'i Adrignola tamin'ny fampiasana CommonsHelper. (CC BY 3.0) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
2. "MenstrualCycle2 en" Nosoratan'i Isometrik - Asa manokana (CC BY-SA 3.0) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny Pathology sy Pathophysiology Fahasamihafana eo amin'ny rafi-panihin'ny lahy sy ny vavy Fahasamihafana eo amin'ny Stimulus sy ny valiny Fahasamihafana eo amin'ny fiovan'ny Frameshift sy ny fiovan'ny teboka Fahasamihafana eo amin'ny ahidrano mena sy maitso
Fahasamihafana eo amin'ny Les Paul Standard sy ny nentin-drazana
Fahasamihafana eo amin'ny vy voa sy ny vy
Fahasamihafana eo amin'ny renirano sy ny renirano
Fahasamihafana eo amin'i Flora sy Fauna
Fahasamihafana eo amin'ny fifanarahana roa taona an'ny Verizon sy ny fifanarahana isam-bolana ary ny fifanarahana herintaona